Ciidamada dowladda oo La wareegay degaano Ka Tirsan Magaalada Dhusamareeb | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Ciidamada dowladda oo La wareegay degaano Ka Tirsan Magaalada Dhusamareeb
Ciidamada dowladda oo La wareegay degaano Ka Tirsan Magaalada Dhusamareeb
Dagaal ayaa Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga Soomaaliya gaar ahaan qeybta 21aad iyo Xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaa uu ku dhex-maray deegaanka Orshe oo dhanka bari 50km ka xiga Magaalada Dhusamareeb ee Caasimadda Galmudug.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kaidb markii Ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen degaankaas oo ay kusugnayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxana dadka degaanka ay sheegeen in uu halkaasi ka dhacay dagaal culus.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada qeybta 21aad ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalka ay Al-Shabaab qasaaro ku gaarsiiyeen, sidoo kalena Ciidamada ay guud ahaan la wareegeen degaanka Orshe ee Gobolka Galgaduud.
Sidoo kale saraakiisha waxaa ay sheegeen in howlgalka uu ka dambeeyay kadib markii dadka degaanka ay u soo gudbiyeen cabasho ku aadan dhibaato ay ku hayaan Al-Shabaab.
Dhowr jeer ayaa Al-Shabaab waxaa weeraro hoobiyeyaal ahaa ay kusoo qaadeen Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, waxaana taasi ay keentay in Ciidamada dowladda ay bilihii la soo dhaafay sameeyaan howlgallo kala duwan.
Previous articleLaftagareen oo Bulshada Waajid kala hadlay furitaanka wadooyinka u xiran Al-Shabaab
Next articleXildhibaan Carabow “Haddii aan Shabaab culeys la saarin, iyagaa ku soo saarayo